I-Clarens River Cottage
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguJacquie
I-Clarens River Cottage ilala ezine kumagumbi okulala amabini abekwe kubunewunewu. Ibekwe ekupheleni kwendlela efihlakeleyo emazantsi eeNtaba zeRooiberg, iClarens River Cottage ijonge kwezona ndawo zintle zibukekayo. I-cottage stoep ijonge ihektare yeegadi ezivuthiweyo ezabelwana nendlu enkulu.
Ngelixa ibucala kakhulu, i-River Cottage yimitha nje engama-500 ukusuka kumbindi weClarens, kunye namanyathelo nje ambalwa ukusuka ekuqaleni kweendlela zokuhamba intaba.
Imiswe ekupheleni kwendlela efihlakeleyo emazantsi eeNtaba zeRooiberg, iRiver Cottage ijonge kwezona ndawo zintle zibukekayo kwenye yezona lali zintle eMzantsi Afrika.
I-cottage stoep ijonge ihektare yeegadi ezivuthiweyo ezabelwana kunye nendlu enkulu kwaye ijikelezwe yi-amphitheatre yeentaba ezichaza iClarens. Ukuphuma kwelanga kunye nokutshona kwelanga kubonelela nge-silhouette emangalisayo yokwenza usuku. Iyure engaphambi kokuphuma kwelanga inomtsalane ngakumbi njengoko isibhakabhaka sasebusuku saMazantsi siguquka sibe nemibala eqaqambileyo, epinki nabomvu de ilanga lichwechwele phezu kweentaba eziseMpuma ukuze ngokuthe ngcembe lihlambe ‘intaba yethu’ emazantsi egadi ngokukhazimla kwegolide.
IClarens inemozulu ephakathi ezintabeni. Ixesha ngalinye lonyaka libonelela ngentlambo ngohlobo lwayo olwahlukileyo: ishushu kwaye iluhlaza eHlobo; igolide, ubhedu kunye nobomvu bamagqabi awayo e-poplar kunye neminye imithi evuthulukayo ekwindla; kunye nokuba nokwenzeka kwekhephu eBusika.
Ngelixa ibucala kakhulu, i-River Cottage yimitha nje engama-500 ukusuka kumbindi weClarens kunye nentaphane yeevenkile, iivenkile zekofu, iivenkile zokutyela kunye neegalari kunye neshishini lethu lokuthengisa utywala. Izinyuko nje ezimbalwa ezantsi kwendlela kwaye ukwi-spruit, kunye neendlela eziphawulwe ngokucacileyo okanye iindlela zokukhwela ezikhokelela kwintlambo epholileyo, enemithi ukuya entabeni, ukuya edolophini okanye phezulu ukuya edamini kunye neendlela zasendle ezingaphaya.